भ्रम न फैलाउने की माननीयज्यू
कोरोना संक्रमितको संख्या जसरी बढ्दैछ, ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या पनि उसैगरी उकालो लाग्दैछ । कोरोनाका विषयमा विज्ञहरू आउनसक्ने भयावह स्थितिप्रति चिन्तित छन् । हिजो होल्डिङ एरिया, क्वारेन्टाइन र आईसोलेशनको चिन्ता गर्नेहरूको ध्यान अब आइसियू र भेन्टिलेटरतिर केन्द्रित हुन थालेको छ । कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेका बयोबृद्ध, बच्चा र दिर्घरोगीलाई बचाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपाय भनेकै संक्रमणले नछोओस् भन्ने हो । यसका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भनेको परिवारका ती सदस्य हुन्, जो घरबाहिर हिँड्नैपर्ने बाध्यतामा छन् । स्वास्थ्य सावधानी नअपनाउने हो भने कोरोनाको क्षतिको अनुमान गर्न गाह्रो हुने निश्चित छ ।
कोरोनाको संक्रमण फैलिँदैगर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनालाई सामान्य भन्दै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न, बेसार पानी खान र हाच्छ्यू गर्दै उडाईदिन सुझाव दिँदा ट्रोल बन्यो । प्रधानमन्त्रीले दिएको सन्देश एकातिर आत्मबल कमजोर नहोस् भन्ने थियो भने अर्काेतर्फ बेसारपानीको प्रयोग अहिले पनि संक्रमितको उपचारको लागि हितकर भइरहेकै छ ।
सुझाव दिनपर्दा हरेक नागरिक स्वयं आफूलाई चिकित्सक सरह ठान्छन् र अर्ति दिन्छन् भन्ने गरिन्छ । यो कोरोना भाईरसका बारेमा कुरा सुन्ने हो भने सबै नागरिक अब यति सचेत छन् कि गफ दिन पायो भने केही समय पढाउन थालिहाल्छन् । त्यसैले अनेकथरी बिचार आउने गरेका छन् । जसले वास्तविकता भन्दा बढी भ्रम छर्दै आएको छ । यसरी ब्यक्तिगत बिचार पोख्ने र भ्रम छर्ने काममा सामान्य नागरिक मात्र नभएर माननीयहरू पनि देख्दा चाँही टिठ लागेर आएको छ । आफ्नो क्षेत्रका जनताका प्रतिनिधि जो धेरै जनताको लागि आदर्श ब्यक्तित्वसमेत हुनु स्वभाविक हो । त्यस्ता प्रतिनिधिले अभिब्यक्त गरेको बिचारका कारण यदि कोही कसैको मात्र ज्यान गयो भने त्यो कति पीडादायी होला गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ ।
अहिले कोरोना संक्रमितको रेसियो दर उच्च छ । करिब ७ सयले ज्यान गुमाएका छन् । मुलुकमा आइसीयू र भेन्टिलेटरको अभाव छ । गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको संख्या बढ्दैछ । यहिबेला दशैं, तिहार, छठलगायतका पर्वहरू संघारमा छन् । बजारमा मानिसहरूको चहलपहल बढ्दै जाँदा संक्रमण उच्च गतिमा फैलनेप्रति सरोकारवालाहरूको चिन्ता बढ्दै गएको छ । योबेला स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्न गराउन तीनै तहका सरकार लागि परेका छन् । तर, यहिबेला जान्ने बुझ्नेहरुबाट पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना हुन छाडेको छ । अझ उहाँहरूबाट आउने अभिब्यक्तिले भ्रम पैदा गराउनु राम्रो मान्न सकिन्न ।
सन्दर्भ मंगलबार मोरङको उर्लाबारीमा लायन्स नमुमा बालगृहको उद्घाटन कार्यक्रमको हो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रमुख अतिथि रहेको त्यसकार्यक्रमा त्यस क्षेत्रका संघीय र प्रदेश सांसदसहित लायन्सका केन्द्रीय नेताहरूको उपस्थिति थियो । त्यसमा १५० जना भन्दा बढी सहभागी थिए । त्यस कार्यक्रममा एक जना प्रदेश सांसदको अभिव्यक्तिले भने सबैको ध्यान खिच्यो । समय अभाव दार्शउँदै मुख्यमन्त्री कार्यक्रम स्थलबाट बाहिरनसाथ बोल्नुभएका माननीयले जब कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभयो सहभागीहरूले मुखामुख गरे । उँहाले कोरोनालाई क¥याङ क¥याङ चबाउनुपर्छ भन्दा ठिकै थियो । तर, जब मासभेला गरेर कार्यक्रम गर्नुपर्छ, मास्क लगाउनु बेकार हो र सेनिटाईजरको काम छैन जस्ता अभिव्यक्ति दिनुभयो, सबै आश्चर्यमा परे । कतिपय सहभागीले त यतिसम्म भन्न भ्याए की आफूलाई कोरोना लागोस्, अनि मात्र चेत खुल्ने रैछ ।
माननीय ज्यूले अभिब्यक्त गर्नुभएको बिचार उहाँको ब्यक्तिगत होला । तर, सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको बिचारलाई अनुशरण गरे समाजको स्थिति के होला ? कोरोना केही हैन भन्ने लागेको हो भने संक्रमण दर किन बढेको होला ? यसकै कारण उकालो लागेको मृत्युको ग्राफ के हो ? बेकारमा विश्वको ध्यान किन यसमै केन्द्रित हुनुपरेको ? तमाम जिज्ञासा म जस्ता सहभागीको छ ।
बिहिबार, २९ असोज, २०७७